पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोडिदिन नेम्वाङलाई ओलीको आग्रह, उपराष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन! « News24 : Premium News Channel
पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोडिदिन नेम्वाङलाई ओलीको आग्रह, उपराष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन!
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । अध्यक्ष ओलीे पार्टीका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न चाहन्छन् ।
महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन शुक्रबार चितवको नारायणी नदी किनारमा भएको थियो । पूर्वनिर्धारित समय अनुसार आजबाट सौराहमा बन्द सत्र हुँदैछ । तर पार्टीमा पदाधिकारी चयनमा नेताहरुले पद दावी गरिरहँदा बन्द सत्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
अध्यक्षमा ओलीका प्रतिद्वन्द्विका रुपमा हालका उपाध्यक्ष भीम रावलले उम्मेदवारी दिने लगभग निश्चित हुने भएको छ । त्यस्तै अन्य धेरै पदमा पनि ओलीकै पक्षका नेताहरुले दावी गरिरहँदा अध्यक्ष ओली निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
एमालेको शुक्रबार बेलुकी बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पार्टीको नयाँ संरचना र पदाधिकारीको संख्या निर्धारण गरिसकेको छ । पछिल्लो केही समय अघि सृजना गरिएको एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओली निकटकै दुई नेताको दावी कायमै छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान महासचिव इश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको दावी कायम छ ।
शनिबार बिहानदेखि नै ओलीले दुवै नेतालाई समहमतिमा आएर अघि बढ्न अनुरोध गरेपनि पोखरेल र नेम्वाङले अडान नछोडेको बताइएको छ । सुवास नेम्वाङले अडान नछोडेपछि ओलीले व्यक्तिगत भेटेर छलफल गरेको बुझिएको छ ।
उक्त भेटमा पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिएर आगमी निर्वाचनपछि नेम्वाङलाई उपराष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव ओलीले राखेको बुझिएको छ ।